Vaovao - Inona no tokony hojereko rehefa mangotraka ny kamio tanky?
Inona no tokony hojereko rehefa miakatra ny kamio tanky?
1. Alohan'ny asan'ny etona dia mila esorina ilay famotopotorana manohitra ny fiakaran'ny rano. Aorian'ny nahavitan'ny sambo sy ny fampangatsiahana ny tanky dia haverina amin'ny laoniny avy amin'ny fivoriambe vaovao.
2. Alohan'ny fiasan'ny sambo dia mila esorina ny plug azo zahana eo ambanin'ny valizy ambanin'ny tany. Aorian'ny fahavitan'ny sambo sy ny vatan'ny tanky dia averina amin'ny laoniny avy amin'ny fivoriambe vaovao.
3. Alohan'ny asan'ny etona dia mila esorina ilay sarontava fantsona fanarenana solika sy gazy. Rehefa vita ny asan'ny etona ary nangatsiaka ny vatan'ny tanky dia haverina amin'ny laoniny avy ao amin'ny fiangonana vaovao izy.
4. Mandritra ny fandefasana etona, ny fantson-drano etona dia tsy maintsy apetaka mafy amin'ny vavan'ny tanky mba hisorohana ny fantsona etona tsy ho hariana avy ao anaty tanky ka miteraka fahamaizana.
5. Ireo mpiasa miasa amin'ny sambo dia tsy maintsy mitondra fitaovam-piarovana amin'ny asa tsara. Rehefa mihetsika sy manamboatra ny fantsona etona dia tokony hozahana moramora izy ireo mba hisorohana ny fifandirana eo amin'ny fantsona sy ny vatan'ny tanky.
6. Rehefa vita ny asan'ny etona dia akatona ny valizy fantsona etona ary esory ny fantsona etona.